IsiZulu - Stage Audio WorksStage Audio Works
IsiZuluiStage Audio Works hiyona ehamba phambili ngokufaka iteknoloji kwisenzo ezisakazwayo ngalesosikhathi eAfrika ngomcabango wokunekezela kuphela ngomsebenzi wezinga eliphezulu, iteknoloji yezinga eliphezulu ukuyenza iciniso yoku-anelisa abathengi nokuyenza kubengcono ukuzijabulisa nokukhanya kwizimakede elizweni laseAfrika.
izicazululo zonke ezihlanganiziwe zifaka, ukukhanya, umsindo, ukubona, ukuhlobisa nomwakho nokwasiza ngokuzijabulisa.
IStage Audio Works yinkampani eyenzayo izinto ezihlukahlukene futhi iquzelela ukuzimisela, isebenza ngokuzimisela, ngezinga eliphezulu nelibanzi.
IStage Audio Works ikholwa ukuthi umsebenzi, ukuwondla, ukufundiswa, izibonakaliso zeprofeshinal nokuziphatha hiyona indlela yoku-anelisa abathengi nokukhula kewnkapani “siwondla i-indastri” yiphupho nokuzimisela kewnkapani yethu.
ukuncedisa kusho ukundlula ukudayisa iziphumo, ifaka ukusebenzela, ukufundiswa, ukucenda ngeteknig nokundlula lapho.